Zimbabwe Clerics Pitch 'National Vision' Paper To Opposition Faction
Religious leaders promoting a a so-called national vision document as a step toward resolving Zimbabwe's national crisis presented the paper Tuesday to the leadership of the opposition Movement for Democratic Change faction of Arthur Mutambara.
Bishop Trevor Manhanga of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe led the delegation of the so-called Heads of Christian Denominations in the presentation to Mutambara and other party officials, including secretary general Welshman Ncube.
The religious leaders presented the document to President Mugabe in late October and to the rival MDC faction led by Morgan Tsvangirai earlier this month.
Neither Mr. Mugabe nor Tsvangirai expressed much enthusiasm about the paper. Mr. Mugabe was cool to its proposal to rewrite the constitution, and Tsvangirai questioned whether the document would have any effect on the government's behavior.
Welshman Ncube told reporter Jonga Kandemiiri of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that his faction will prepare a comprehensive response to the clerical proposals.